Shirgada SONY Oo La Jabsaday Shaqaaleheedana Loo Hanjabay - iftineducation.com
Shirgada SONY Oo La Jabsaday Shaqaaleheedana Loo Hanjabay
iftineducation.com – Fariimo hanjabaad ah ayaa loo diray shaqaalaha shirkadda Sony kadib markii la jabsaday network-ga shirkadda.sony
Hay’adda baarista ee FBI-da ayaa sheegtay in ay dabagalayso farimahaasi hanjabaadaha ah ee loo diray howl-wadeenada shirkadda Sony, hasa yeeshee, FBI-da ayaa ka gaabsatay in ay faahfaahin dheeri ah ka bixiso natiijooyinka hordhaca ah ee ka soo baxay baaritaanka ay sameeyeen
Fariimaha ayaa sidoo kale loogu hanjabay in waxyeelo loo gaysan dono waalidiinta shaqaalaha hadii aysan u hogaansamin awaamiirta lagu faray fariinta.
Shirkadda Sony ayaa ilaa iyo hadda aanan wax faalo ah ka bixin fariimaha hanjabaadda ah.
Bishii la soo dhaafay, ayaa kooxaha wax jabsada ee (Hackers), sheegayna in ay yihiin “ilaaliyaasha nabadda” ayaa jabsi kadib, helay xog sir ah oo ay leedahay shirkadda sony, waxa ayna ku hanjabtay in shaacin doonto hadii aanan si dag dag ah looga jawaabin dalbakooda. Ma cadda ilaa iyo hadda waxa ay dalbanayaan kooxdaani.
Cadaymo horudhac ah ayaa tilmaaya in kooxda hacker-ada ah soo dirsadeen maamulka waqooyiga Kuuriya oo horay gaashaanka ugu daruurtay qaar kamid ah howlaha shirkaddaasi
Kooxaha wax jabsada ayaa waxaa ay ka faa’iidaystaa dal daloolada shirkadaha, waxaana badanaa la sheegaa in shariikadaha tartarnka ku jiraa ay isu adeegsadaan.
9 Qof Oo Ay Haboontahay Inaad Ka Fogaato Shukaansigooda..!
Wiil Soomaaliyeed oo Ku Guuleystay Qaxootiga Sanadka 2014